DLULA I-Eurocopter EC120B Colibri v1.3 X-Plane I-10 - iRikoooo
I-Eurocopter EC120B Colibri v1.3 X-Plane 10
Usayizi 16.2 MB
Play 5 421
Faka ngokuzenzekelayo I-version ye-2 yokufaka
Kuhlolwe kulungile nge X-Plane 10
Umbhali: Beat B, Propsman
Eurocopter EC120B colibri 'P-ROP5' v1.3 Special Izinsiza kusebenza.
I Eurocopter EC120 colibri (English: hummingbird) iyinhlangano-isihlalo 5, single-engine, Rotor single main, helicopter ukukhanya. Ngokuhlanganyela eklanyelwe futhi lakhiwa Eurocopter, China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC), Harbin Aviation Industries (Group) Ltd (HAI) kanye Singapore Technologies Aerospace Ltd (STAero) at Eurocopter eFrance Marignane ndawo, wabiza EC120 B libuthene by Eurocopter eFrance nase-Australia. EChina, indiza kuveza Harbin njengoba HC120. Harbin Aircraft Ukukhiqiza Corporation (HAMC) waqala yokukhiqiza HC-120 e 2004, the line umhlangano kuleli nasenyakatho yeChina muzi kuphela HC-120 line ngaphandle yaseFrance. Chinese PLA Army futhi imibutho yamaphoyisa endawo ukuthenga HC-120 ezinophephela emhlane.
Eurocopter unesithakazelo 61% kule phrojekthi, ne CATIC ngizoke 24% kanye STAero nge 15% share. (Widipedia)
It is uza kahle Echichima izici:
- Zonke entsha, kunemininingwane eminingi 3D abanikeze asebenza nabo nge animated ngokugcwele Izilawuli flight nomshayeli.
- Groovy 3-D Head Up / Down Khombisa, ne ezihambayo ibalazwe futhi izindiza-agibele amahhashi isiqophi ikhamera.
- GPS pop-up ukubonisa lula ukusebenza izinkinobho ezincane in imvelo 3D abanikeze asebenza nabo
- Njengoba kunembile ukulingisa kwe-Eurocopter VEMD (Vehicle and Display Multi-function Display) njengoba X-Plane izimvume.
- 3D okulingana iphaneli esobala: umyalo 'transpanel' ihumusha wonke abanikeze asebenza nabo esobala.
- Perforated phambili abanikeze asebenza nabo esiyilweni ukwandisa ukubonakala kwehle.
- Setha Full of ovuthayo yokwenza uhlinzeke namaqiniso eliphansi kodwa akucace ebusuku-ukukhanyisa sekulingisa.
- New, okungeyona eyamaphoyisa Evili-Genius-style upende umsebenzi - konke-mnyama ngaphandle zegolide fenestron flow-straighteners ....
- Cool kakhulu ingilazi reflection imiphumela ngaphakathi nangaphandle.
- Amafreyimu angcono kancane kunalawo azuzwe ngokuzenzakalelayo X-Plane 747
- Futhi indiza kahle kakhulu .....
I-Eurocopter X3 v1 X-Plane 10
I-Hughes 300C X-Plane 10
I-Airwolf X-Plane 10